नेपालमा झन्डै ४० हजार बालबालिका एचआईभी एड्स संक्रमित
काठमाडौं । नेपालभर एचआईभी एड्स संक्रमित बालबालिकाको संख्या ३९ हजार ३ सय ५२ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ सम्म ३९ हजार दुई सय चार
बालबालिका संक्रमित रहेकोमा एक वर्षमा एक सय ४८ जना थपिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक....
​जाडोमा नुहाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
न्यूजलय सोमबार २५, मङि्सर २०७४
तातो पानीले नुहाउँदा एकतर्फ आराम मिल्छ भने अर्कोतर्फ सुन्दरतामा नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ । अधिक तातो पानीको प्रयोगका कारण तपाईको छाला पनि जल्न सक्छ । यसबाहेक तपाईमा छालाको समस्या समेत देखिनसक्छ ।
अधिक तातो पानीले नुहाउदा शरिरको माथिल्लो भागमा रहेको ओयली लिअर हट्न जान्छ....
​नेलपोलिस लगाउनु हुन्छ ? सावधान !
महिलाको सौन्दर्यमा नङको खास भूमिका रहेको हुन्छ । सलक्क, सफा, चम्किलो र मिलेको नङले हातको शोभा बढाउछ । नङको आकार मिलाउन मेनीक्यौर गर्ने साथै, नेल पोलिस लगाईन्छ ।
नङलाई विभिन्न तरिकाले सजाउन सकिन्छ । यसका लागि नेलपोलिस चाहिन्छ । नेलपोलिसको माध्यामबाट नङलाई आकर्षक बनाउन....
​दाँत ब्रस नगर्दा के हुन्छ ? जान्नुहोस्
न्यूजलय बुधबार २०, मङि्सर २०७४
आजभोलि धेरै मानिसको दैनिकी दाँत ब्रस गरेर सुरु हुन्छ । तर, नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसमा भने दाँत ब्रस गर्ने संस्कार अझ पनि छैन । यद्यपि, दाँतलाई चम्किलो बनाउन र किराले खानबाट बचाउनका लागि दाँत माझ्ने धेरैको बुझाइ छ । तर, हालै भएको एक अनुसन्धानले दाँत....
​बन्दागोभी खाँदा होस गर्नुहोस्
कतिपय बेमैसमी तरकारीहरु खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भने कतिपय तरकारीहरुले मानिसको ज्यानै जान सक्दछ । त्यसैमध्येको बन्दागोभी एक हो ।
बन्दागोभी तरकारीको रुपमा मात्रै होइन, सलाद तथा अचार बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार वर्षायाममा बन्दागोभी खाँदा त्यसको पातको....
सावधान ! फोहोर बालेर आगो नताप्नु होस्
इटहरी । दैनिक जिवनमा हामी हाम्रो घरवरपर वा सडक सफा राख्नकालागी वरपरको फोहोर जम्मा गरेर बाल्ने गर्दछौ । त्यसमा पनि चिसो मौसममा आगो ताप्न फोहोर बाल्ने गरीन्छ ।
चिसो बढेसैै विभिन्न स्थानम जताततै भेटिने फोहोरमा विशेषगरी प्लाष्टिक वा जंकफुडका खोलदेखि टायरसमेत हुन्छन जसलाई बालेर....
यस कारण खानुहोस् खाली पेटमा सक्खर र जीरा पानी
न्यूजलय सोमबार १८, मङि्सर २०७४
जीरालाई मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले खानाको स्वाद र सुगन्ध बढाउँछ । अनि सक्खरको मिठासले मिठाईहरूको स्वाद बढाइदिन्छ । यी बहुगुणी जीरा र सक्खर पानीमा मिसाएर खाँदा अनेकौं रोगबाट बच्न सकिन्छ । जस्तैः
पेट रोगः कब्जियत, ग्यास, पेट फुल्ने र पेट....
​खाना खादा पानी पिउने कि नपिउने
हाम्रो पाचनप्रणाली अनेकौं अंग, एन्जाइम र तिनीहरूबाट स्रावित पदार्थ मिलेर बनेको हुन्छ । यी सबै कुरा ठीक तरिकाले रहँदा मात्र पाचन प्रणालीले सही रूपमा काम गर्छ ।
पाचन प्रणालीको ठोस र तरल दुवै भागले एकैचोटि खाना पचाउन सक्रियता देखाउँछन् । शरीरका लागि पानी मुख्य....
​जाडोमा कुर्कुच्चा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
न्यूजलय आइतबार १७, मङि्सर २०७४
कुर्कुच्चा फुटेर बाक्लो अनि कडा सेतो छालाको लेउ लाग्ने समस्याले अधिकांशलाई सताइरहेको हुन्छ । वृद्धवृद्धाहरूलाई मात्रै नभएर युवा तथा प्रौढहरूमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्दछ ।
सबैले यसलाई ‘कुर्कुच्चा फुटेको’ भन्छन्, तर खासमा यो ‘फुटेको’ होइन । यहि नै शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली हो ।....
​नफाल्नुहोस् मुलाको पात, यस्ता छन् फाइदाहरु
न्यूजलय शुक्रबार १५, मङि्सर २०७४
धेरैजसो मानिसले मुला खाएर त्यसको पात त्यसै फ्याकिदिने गर्छन् । तर तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ मुलाभन्दा बढि मुलाको पात खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ जसले हामीलाई धेरै खालका स्वास्थ–सम्बन्धी समस्याहरुबाट बचाउँन मद्दत गर्छ ।
काठमाडौँको टोखामा अज्ञात व्यक्तिद्वारा छुरा प्रहार गरी एक जनाको हत्या
विराटनगरको सहिद रंगशालामा मंसिर भित्रै फ्लड लाइट जडान गरिने
पिङ खेल्न गएकी ४ वर्षीया बालिका बलात्कृत गर्ने बालक पक्राउ